ပိုမိုပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုပိုမိုပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်
04 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ 0
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး Adana6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုUlukışlaစခန်းများလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating အလုပ်နူးညံ့ 2019 ကုမ္ပဏီများမှလေလံဆွဲထားပြီးဖြင့်အတိအကျမသိရသေးရလဒ်များကိုစာချုပ်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်နှုန်း 333876 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ (TCDD) 373.442,62 / 589.524,00 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 30 TL နှင့်ပိုမိုပေါ့ပါး,
373.551,10 အဆိုပြုချက်ကိုနှုန်းရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတူးဖော်ရယူလိုက်သည်။ နုလေလံပါဝင်4ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, 10 အရေအတွက်ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအဆင့်ကိုဖြတ်မှာပြုသောအမှုအလုပ်ဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ် 90 (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လက်ဝါးကပ်တိုင်အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating ၏ပေါ့ပါး-Ulukışlaစခန်းများ 27 / 07 / 2019 ပိုမိုပေါ့ပါး-Ulukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating TCDD ADANA6။ ကျမ်းပိုဒ်အမှတ် 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေတွင်ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာUlukışlaစခန်းများပေါ့ပါးတန်းအပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 333876 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: တစ်) အရည်အသွေး၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်မှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထားMıntıka၏6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု 04 / 09 / 2019 TCDD6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 332783 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 424.049,62 TL နှင့် 660.161,48 TL, အရာ TCDD6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaစီးပွားရေးနူးညံ့ 26 များ၏အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating နှင့် ပတ်သက်. ကုန်ကျစရိတ်များ၏အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating တင်ဒါရလဒ် £ 425.135,75 ကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းချက်ကို၏နောက်ဆုံးရလာဒ်များပေါ်တွင် အခြေခံ. လေလံနှင့်ဆုချီးမြှင့်သည့်စာချုပ်တည်ဆောက်နေ MAD ဗြာမဟုတ်။ MOT ။ Vehicle ။ ငှားရမ်းမှုပေ။ TURZ ။ SAN ။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ , LTD ။ STI ။ ဒါဟာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နုလေလံပါဝင်7ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်ဒါ 8 အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအလုပ်အပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်။ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Superstructure သက်တမ်းတိုးဖျော်ဖြေလက်ဝါးကပ်တိုင် Way ကိုအယ်လ်ထိတွေ့မှု၏ပေါ့ပါး-Ulukışlaစခန်းများ 22 / 05 / 2019 လေလံအပိုဒ် 6- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 TO သို့ RELATED နုနှင့်ပြဿနာများ၏ Superstructure သက်တမ်းတိုးဖျော်ဖြေ Inter-Ulukışlaဘူတာလမ်းမကြီးအယ်လ်ထိတွေ့မှု၏ပေါ့ပါးxnumx.bölg TCDD ညွှန်ကြားမှု။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားxnumx.bölg Seyhan / Adana ခ၏ညွှန်ကြားမှု) လိပ်စာ: Kurtuluş Mah ။ Atatürk CAD ။ 1.1 Seyhan / Adana ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:601120 / 0322 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 4575354 4249 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ: ကဖေး Avaric ယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာဗျူရိုဦးစီးချုပ်မောရှေသည် 0322 ့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်အရေအတွက်ကိုမှာတာဝန်ခံဝယ်ယူရေးန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Superstructure သက်တမ်းတိုးဖျော်ဖြေလက်ဝါးကပ်တိုင် Way ကိုအယ်လ်ထိတွေ့မှု၏ပေါ့ပါး-Ulukışlaစခန်းများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါအတွက် Haydarpasa-တူရကီရထားလမ်းအဆင့်ကိုကူး